Adeegga joogsi ee Shiinaha One for stamping metal Manufacture and Factory | KORINTA-Elec
Waa Maxay Stamping?
Qaybaha shaabaddu waa qaybo biraha ka samaysan, oo ah, qaybo lagu baaraandegi karo shaabadaynta, foorarsiga, fidinta iyo habab kale. Qeexitaan guud waa - qaybo leh dhumuc joogto ah oo ku jira habka socodsiinta. Qaybaha u dhigma ayaa ah qaybo tuuraya, qaybo been abuur ah, qaybo mashiinno, iwm tusaale ahaan, qolofka birta ah ee ka baxsan baabuurka waa biraha biraha ah, iyo qaar ka mid ah weelasha jikada ee ka samaysan birta biraha ah iyagana waa biro.
Shaabaddu waa nooc ka mid ah farsamada dayactirka baabuurta, taas oo ah in la dayactiro qaybta qalloocan ee qolofka birta baabuurka. Tusaale ahaan, haddii qolofka baabuurka god lagu dhufto, waxaa lagu soo celin karaa sidiisii ​​hore iyada oo loo marayo biro.
Guud ahaan marka la hadlayo, qalabka aasaasiga ah ee warshadda qaybaha shaabadaynta waxaa ka mid ah mashiinka xiiridda, mashiinka feerka CNC / laser, plasma, mashiinka goynta biyaha / mashiinka isku -darka, mashiinka foorarsiga iyo qalabka kala duwan ee kaabayaasha ah, sida uncoiler, mashiinka dheellitirka, mashiinka qashin -qubka, alxanka barta, iwm.
Qaybaha shaabadaynta ayaa mararka qaarkood loo isticmaalaa sidii bir -jiidis. Guud ahaan, qaar ka mid ah xaashiyaha birta ayaa lagu shaabadeeyaa gacanta ama dhintaan si ay u soo saaraan qallooc balaastig ah si ay u sameeyaan qaabka iyo cabbirka la rabo, iyo qaybo ka sii adag ayaa lagu samayn karaa alxanka ama qadar yar oo makiinado ah, sida qiiqa, foornada birta birta ah iyo qolofka baabuurta sida caadiga ah loo isticmaalo qoysaska.
Qasaarooyinka Die shubay
Samaynta qaybo shaabadaynta waxaa lagu magacaabaa farsamaynta biraha biraha. Gaar ahaan, tusaale ahaan, adeegsiga taargooyinka si loo sameeyo qiiqa, foostooyinka birta, haamaha saliidda, dheriyada saliidda, tuubooyinka hawo -qaadista, suxullada waaweyn iyo kuwa yaryar, meelaha Tianyuan, qaababka funnel -ka, iwm. , sameynta foorarka, alxanka, riveting, iwm, oo u baahan aqoon joometeri gaar ah.
Hore: Adeeg hal joogsi ah oo shubka dhimashadiisa ah
Xiga: Is -habeynta biraha OEM ODM
Shaabadaynta Birta ee Khaaska ah
Sax Custom Sax Birta
Gurmadka Terminalka Gaarka ah
Hardware Stamping Shiinaha
Birta Gurdanka Shiinaha
Kordhinta Birta Gurdanka
Birta Gurdanka Mashiinka
Gurmadka Terminal -ka Birta
Shaabadaynta Birta Micro
Ku dhejinta birta Odm
Oem Sax Birta Gurdanka
Shaabadaynta Qalab Sax ah
Sax Warshadaynta Gurdanka Qalabaynta
Sax Birta Gurdanka
Qalabaynta Birta Gurmadka Sax
Sax Warshadayda Gurdanka Birta
Kaadhka Shrapnel Sax ah
Gurdanka saxda ah
Tilmaamaha Terminals Stamping
Terminals -ka Saxsan ee Ku -habboonaynta Shaabadaynta
Stamping -ka Terminalka
Kordhinta Terminal Stamping
Qaybaha shaabadaynta jumlada
Alaabta La Soo Bandhigay, Khariidadda bogga, Qaybaha shaabadaynta jumlada, Aluminium CNC Qaybo Machined, Boolal, Sheet Birta Stamping Products, Dhimashada Magnesium, Guga Saxanka, Dhammaan Alaabta